Nadiifiyeyaasha PU Foam Foam
Laba qaybood PU Foam
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Nagu saabsan>Profile Company
Sunrise Chemical Industrial Co., Ltd (Shanghai Yusheng Sealing Material Co., Ltd) waa shirkad teknolojiyad sare leh oo loo yaqaan 'ISO9001-2015' oo ku takhasustay cilmi baarista iyo horumarinta dalabka tikniyoolajiyada adhesive iyo sealing. Kaliya ma nihin safka hore ee waxsoosaarka, laakiin waxaan sidoo kale nahay mid ka mid ah kuwa ugu badan soosaarayaasha PU ee Shiinaha. Himilada shirkaddu waa in la dhiso sumad caalami ah oo ay noqoto saldhig wax soo saar oo heer caalami ah.
Warshadaha Kiimikada ee Sunrise waxay leedahay labo saldhig oo wax soo saar oo casri ah oo ku yaal Shanghai iyo gobolka Shandong, Shiinaha, oo daboolaya dhul ballaadhkoodu yahay 70,000 mitir oo laba jibaaran waxayna ku qalabeysan tahay khadad wax soo saar oo si buuxda otomaatig ah looga soo dhoofiyo Yurub.
Warshadaha Sunrise Chemical waxay leedahay maareyn soosaar dhameystiran iyo nidaam hubinta tayada. Waxaan helnay shahaadada tayada ee ISO 9001-2015. Annaga oo ah hogaamiyaha suuqa ee xayeysiinta iyo foffooyinka PU, waxaa naloo cadeeyay inaan awood u siineyno macaamiisheeda adeegyo tayo sare leh oo joogto ah.
Sunrise Chemical Warshada 'SUNRISE' waxay ku guuleysataa sumcad sare iyo wacyigelin shirkadeed ka dib ku dhawaad ​​20 sano oo horumar ah. Alaabteenu waxay soo mareen qaybo kala duwan oo dalabka ah, sida dhismaha, qurxinta guriga, qaybaha elektiroonigga ah, soo saarista gawaarida, gaadiidka tareenka, iwm. Weliba, boodhka SUNRISE PU wuxuu sii waday suuqa dhismaha dhamaadka-sare.
Alaabta SUNRISE waxaa adduunka oo dhan laga iibiyaa in kabadan 50 dal, sida Jarmalka, Mareykanka, Ruushka, Japan, South Korea, India iyo Dubai. Waxaa sidoo kale si ballaaran loogu isticmaalaa mashaariic badan oo waaweyn, sida Xarunta Qaranka ee Ciyaaraha Qaranka, Xarunta dhaqanka ee EXPO, Xarunta Jinmao Tower, Tomson Riviera, Graces Villa, Star River, Pudong International Airport, Xarunta Dhaqaalaha Caalamiga ah ee Beijing, Citibank iyo Dhismaha Federalka Ruushka, oo ay ka heleen faallooyin wanaagsan macaamiisha.
Waxaan rajeyneynaa inaan abuurno mustaqbal wanaagsan oo ku saabsan warshadaha kiimikada annaga iyo asxaabteyda qaaliga ah.
Cinwaanka: 28F, No.1958, Zhongshan North Road, Shanghai, P, R.China
Xuquuqda daabacaadda © 2020. Sunrise Chemical Industrial Co., Ltd. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh.